Semalt: Torolàlana momba ny Botnet Traffic - Fomba hanalavirana
Ny bot dia solosaina "automation zombie" izay mitarika ho toy ny olombelona tena izy. Ny bot dia mety hanisy endritsoratra amin'ny seriver na mpampiasa. Ohatra, ny botsika dia afaka manatanteraka fanafihana malware mitarika ny PC na ny fitaovana finday. Toy izany koa, ny botsika dia afaka manafika lohamilina iray mitondra voka-dratsy maro tahaka ny fanafihana DDoS. Vohikala maro toy ny Google sy PayPal dia miankina amin'ny botsika hanamafisana ny asany. Ny ankamaroan'ny traikefa an-tserasera manokana dia miankina amin'ny fampiasana ny botsika mahomby. Ny hacker sy ireo olona manana fikasana ratsy dia afaka mampiasa bots ihany koa mba hanatanterahana ny hosoka amin'ny aterineto. Ny bots dia tsy rindrambaiko ratsy fa manana fampiharana manan-danja ho an'ny hosoka maro amin'ny aterineto. Ohatra, misy tranonkala sasantsasany ahitana botsika izay afaka manangona fampahalalana momba ny carte de crédit avy amin'ny mpampiasa maro.
7) Artem Abgarian, mpitantana mpanampy amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa ao amin'ny Semalt , dia manolotra olana sasantsasany momba izany.
Ahoana no namoronana botnets
Mety manontany tena ny amin'ny fifamoivoizana botnet, ary ny zavatra azony atao. Ny botnet dia misy vondrona na tambajotr'ireo solosaina "zombie" hiara-hiasa toy izany. Botsa na milina maromaro voadonan'ny bôtô dia mety miteraka tahaka ny zombies amin'ny valin'ny faneraseran'ny mpamaky. Raha ny marina, ilay mpanafika dia mitaky ny mety ho voka-dratsin'ny fahavoazana na lasibatra. Avy eto izy ireo dia mikendry ny hametraka ny rindrambaiko amin'ny solosaina. Amin'ny ankapobeny, mampiasa mailaka amin'ny mailaka ny olona mandefa bots amin'ny ordinatera. Avy eo dia mamitaka ilay niharam-boina izy ireo mba hikotika bokotra an-tsehatra izay manomboka ny fanafihana manontolo. Ireo mpampihorohoro hafa dia mandefa mailaka imailaka misy malware sy tranaona..
Rehefa misy fitaovana napetraka eo amin'ny ordinateran'ny tra-boina, dia ampiasainy ny fahafahan'ny seraseran'ny PC hanatanterahana ny fanafihany. Ohatra, mifandray amin'ny mpizara domeniny izy ireo izay misy ny baiko sy torolàlana. Ny olona ao ambadiky ny fanafihan'ny botnet dia mampiasa ny server sy command (C & C) server mba hanangona ireo fampahalalana ilainy avy amin'ny milina mpamokatra.
Ny mpikomy amin'ny tranonkala izay mampiasa ny rafitra botnet dia manana programa mpanjifa izay ahitana ny torolalana ho an'ny bots. Ireo asa ireo dia mety hahitana ny angon-drakitra, ny fampiasana ny tranokala (tenimiafina, carte de crédit, logins, ary ny cache), mifehy ny ordinatera na mampiasa ny ordinateran'ny solon'anarana. Ny lafiny iray amin'ny lafiny botnets amin'ny botnets dia ahitana ny fahafahana mifehy ny sasantsasany na bots (na 8).
Ny vokatry ny botnets
Botnets marikiriky ny fiarovana ny aterineto amin'ny tranonkala maro. Ny fampahalalam-baovao sy ny filaminana dia voakasika amin'ny fanafihan'ny botnet. Rehefa mametraka malware amin'ny solosaina iray ny mpampiasa iray, dia tsy voafehin'ny mpampiasa intsony ity fampahalalana ity. Ireo olona izay mitahiry fampahalalana sarobidy toy ny kaonty ara-bola, fampahalalana momba ny banky, fahazoan-dàlana logistika, sns .;
Ny mpamono dia afaka manafika solosaina maro araka izay azo atao noho ny antony. Ohatra, ny fanafihana botnet dia namoaka ny fandàvana ny fanafihana amin'ny serivisy. Ny fanafihana DDoS dia mitaky ny fandefasana tranonkala maro ho an'ny mpizara iray, hampihenana ny fahombiazany noho ny fandaharam-potoana. Amin'ny tranga faratampony, dia mitondra tranokala iray manontolo amin'ny alalan'ireto teknika ireto ny olona.
Ny fampahalalam-baovao Botnet dia mahazatra amin'ny fampiasana aterineto isan'andro. Ohatra, ny olona dia afaka manomboka fanafihana botneto hamoronana fifamoivoizana sandoka na sari-panavaozana. Ity lahatsoratra SEO ity dia ahitana fampahalalana toy ny hoe inona ny fifamoivoizana botnet. Azonao atao ny miaro ny rafitrao amin'ny fiantraikan'ireo rafitra fanafihana botnet Source .